Samsung's Exynos 8895 mgbawa ga-abụ 27% ike karịa ma rie 40% obere ume | Gam akporosis
Samsung's Exynos 8895 mgbawa ga-abụ 27% karịa ike ma rie 40% obere ike
Exynos 8895 mgbawa nke Samsung rụpụtara ma sitere na usoro Exynos 9 nke ndị nhazi, a na-arụworị ya n'ụzọ buru ibu.
Ihe mgbawa Exynos 8895 ọhụrụ a, nke enwere ike ịnọ na nke mbụ ya na ụdị nke Galaxy S8 ma ọ bụ Galaxy S8 Plus na-abịa, nwere isi asatọ na ọ bụ nke mbụ sitere na Samsung iji teknụzụ usoro 10-nanometer (nm) FinFET, Kedu ihe ga-enye ohere iji rụọ ọrụ nke ihe ruru 27% karịa ma na-ewe 40% obere ume Tụnyere ndị okenye 14nm technology.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime anyị ga-efu kpamkpam mgbe ọ na-egwu ala n'ime akụkụ teknụzụ, Exynos 8895 kwesịrị ime ka ọ dị mfe ịnweta. ngwa ngwa njikọ LTE n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ na-ejikọ otu modem gigabit nke na-akwado njikọta ụgbọelu ise (5CA) - na-enye «1Gbps downlink (Cat.16) na 5CA uplink na 150 Mbps (Cat.13) na 2CA», dị ka ozi nke Samsung nyere.
Mana Exynos 8895 agaghị enye naanị ọsọ na ike, ọ ga ọ ga-enyekwa 'ọkwa ọzọ' eserese eserese, gụnyere obere njedebe nke 4K VR, ekele maka Mali-G71 GPU. Dabere na ụlọ ọrụ South Korea, mgbawa ọhụụ na-arụ ọrụ ruru 60% karịa onye bu ya ụzọ kemgbe Multi-Format Encoder (MFC) nke 8895 dị elu. na-enye gị ohere ịdekọ ma kpọọ ọdịnaya vidiyo ruo 4K na 120 fps.
Ọzọkwa gụnye nkwado maka igwefoto MPN 28 na ihe onyonyo onyonyo onyogho nke gha enyere aka meputa “oyuyo DSLR dika foto” Samsung kwuru. Njirimara nchebe ka mma, na akụrụngwa ka mma maka AI (ọgụgụ isi) na maka mmụta na-akọwapụta nkọwa ya dị mkpa.
Samsung ọhụrụ mgbawa ga-eche ihu na Qualcomm si Snapdragon 835, nke ga-abata mgbe e mesịrị nke afọ a, ha abụọ nwere ike ịchọta ya na nsụgharị dị iche iche nke Galaxy S8.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung's Exynos 8895 mgbawa ga-abụ 27% karịa ike ma rie 40% obere ike
Enwere data iji tụnyere ya na 835 na ndị ọzọ?
Zaghachi José Francisco
3 dị egwu dị egwu ma na-arụ ọrụ ndị egwu egwu Android
Nke a bụ otu esi arụ ọrụ na WhatsApp ọhụrụ